Malunga nathi-Xuzhou Jin Guin Yuan Ukupakisha iimveliso Co, Ltd.
Wamkelekile kuJin Guan Yuan
Xuzhou Jin Guan YuImveliso yokuPakisha Co, Ltd Yimveliso eqokelela yokufaka isixhobo esinezinto ezifanelekileyo zokuvavanya kunye namandla aqinileyo obuchwephesha. Iimveliso zethu eziphambili zonke iintlobo zeebhotile zeglasi, izitya, iikomityi, izinto zokuthambisa kunye neziqhumiso ezinento yokwenza nezibandakanya izitshizi zempompo, izixhobo zokutshiza ngempazamo, iimpompo zokuhambisa, ii-atomizer zeziqholo, nezinye izinto zokwazisa.
Inkampani yethu igcina udumo oluhle kakhulu kumthengi ngamnye, kwaye iimveliso zethu zivunywa ngabathengi. Inkampani yethu ibambelela kwifilosofi yokuphatha ethembekileyo kunye nokunyaniseka, ihlala igxininisa ekuboneleleni abathengi iimveliso eziphezulu.
Zive ukhululekile ukubonisana
Samkela nayiphi na abathengi abatsha okanye abadala ukuba basityelele okanye basibuze. Siza kuphendula kungekudala.
UJin Guan Yuan ungomnye wabathengisi abakhulu kwi-China yasekhaya iminyaka engaphezu kwe-10. Sineefektri zethu kwaye zinokubonelela ngeyona nto ibalaseleyo, amaxabiso asezantsi, ixesha elifutshane lokuhambisa, kunye nenkonzo ebalaseleyo. Kananjalo sineendawo zokugcina izinto ezininzi kumantla eChina, indawo yokufihla eyi-8000 yeemitha ezisikwere. Ngempahla enkulu yokugcina izinto, sihlala silungiselela izinto ezikhoyo, ezinokukwenza kube lula ngakumbi ukudibanisa isitya kunye nokuthumela iimpahla kwangoko.
I-EU / i-EU, i-SGS, i-FDA, i-LFGB, i-CE, i-NTC3536 (i-ColOMBIA), i-CIQ
Ukusebenzisana kunye nokuPhumelela
Ngexesha lomsitho, wonke umntu wayewonwabele ubuhle obuhle, ukuziqhelanisa nomzimba, ukomeleza ukuqaqamba kweqela, ukunxibelelana ngeemvakalelo phakathi kwabalingane, kwaye nokubeka isiseko esiqinileyo sophuhliso oluzinzileyo.
Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Iglasi yezipho zeglasi, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yeJar Cosmetic, Iseti yeBhotile yeZithambiso, Ibhotile ye-cosmetic,